ဖိုးသူတော်၏အတွေးများ | My Thoughts, My Blog
Hey there! Thanks for dropping by ဖိုးသူတော်၏အတွေးများ! Takealook around and grab the RSS feed to stay updated. See you around!
Sketch of Technology.
Filed under: ဆောင်းပါး — 1 Comment
၉.၂.၂၀၁၁ ရက်နေ့က မြို့ထဲသွားဖြစ်ရင်းနဲ့ စာပေလောက( ၅ ) ကိုဝင်ဖြစ်လိုက်သည်။ ဒီလအတွင်း စာအုပ်တွေဝယ်တာ များနေလို့ မ၀ယ်တော့ဘူး ဆုံးဖြတ်ထားသော်လည်း သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ တော့ စာအုပ်တွေ လိုက်ကြည့်ဖြစ်သည်။ လိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ သရေယိုချင်စရာ စာအုပ်တွေ တွေ့နေတော့ စိတ်က မနည်းထိန်းထားရပါသည်။ ဒီလိုနှင့် သူငယ်ချင်းကို ဟိုစာအုပ်ယူ၊ ဒီစာအုပ်ဝယ် စာအုပ်ဝယ်လမ်းညွှန်လုပ်ရင်းနဲ့ စာအုပ်တွေကို လျှောက်ကြည့်နေမိသည်။ စိတ်ထဲတော့ မရိုးမရွနှင့် ဆာလောင်နေသော ကလေး လူကြီးခွင့်ပြုချက်မရသေးလို့ စားပွဲပေါ်ကကိတ်မုန့်စားချင်သဖြင့် ပါးစပ် တပြင်ပြင်ဖြစ်နေသည်နှင့် တူပါသည်။ တကယ်တော့ အလကား လျှောက်ကြည့်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ထဲက လိုချင်နေတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ကို ရှာနေမိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး စာအုပ်ပုံတွေကြားထဲမှာ ဘယ်လိုမှ ရှာမတွေ့ပါဘူး။
နာရီဝက်လောက် ကြာအောင် စာအုပ်စင်တန်းတွေကို မွှေနှောက်ကြည့်ရှု့ပြီးနောက် ကျနော် မနေနိုင်သည့်အဆုံး ကောင်တာမှ အမျိုးသမီးအား မေးမိလိုက်တော့သည်။ ကျနော် လိုချင်သည့် စာအုပ်မှာ ဒေါက်တာမောင်မောင်ညိုရေးသော “ကံကောင်းထောက်မ တောက်ပကြယ်တပွင့်” ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာနှင့်ကျနော် အသက်အရွယ်ပညာအရည်အချင်းများစွာ ကွားခြားပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ၂၁ ရာစု၏ ကောင်းမွေ တခုဖြစ်သော အင်တာနက်အနုပညာယဉ်ကျေးမှု မှာ စီးမျောမှုခြင်း တူသဖြင့် ဆရာမောင်မောင်ညိုနှင့် ကျနော် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကြီး တခုတွင် မိတ်ဆွေများဖြစ်နေကြသည်။
ဆရာ ထိုစာအုပ်အကြောင်း ကြေညာကတည်းက ကျနော် စိတ်ဝင်တစားဖတ်ချင်နေသည်။ ကျနော်သည် ကျော်ကြားသောသူတိုင်း၏ အတိတ်ဇာတ်လမ်း၊အတ္ထုပ္ပတ္တိတိုင်းကို စိတ်ဝင်စားသူမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် စိတ်ဝင်စားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ငယ်ဘ၀ဇာတ်လမ်းများမှစ၍ ထိုသူတို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ကာလ၊ အကြောင်းအရာ၊ ဆက်ဆံခဲ့ရသော သူများ အစရှိသဖြင့် စိတ်ဝင်တစားရှိတက်ရာ ဒေါက်တာမောင်မောင်ညို၏ စာအုပ်ကို ဖတ်ရှုလိုချင်း အာသီသ ဖြစ်ပေါ်သည်မှာ ထိုကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
စာအုပ်အရောင်းကောင်တာမှ အမျိုးသမီး ညွှန်ပြသည့် စာအုပ်စင်တွင် ကျနော်လိုချင်သော စာအုပ်ကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကိုတွေပါသည်။ ကျနော် ၀ယ်လာခဲ့သည်။ ဒီလိုစာအုပ်မျိုးရေးသော စာရေးဆရာ ဒေါက်တာမောင်မောင်ညိုကိုလည်း စိတ်ထဲမှ ကျေးဇူးတင်နေမိသည်။ ကျနော့်အတွက် သူနှင့် သူ့ခေတ်ပြိုင်များ၊ ဟိုတုန်းက နိုင်ငံရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေးကစလို အခြေအနေအရပ်ရပ်များကို ဒီလိုစာအုပ်များမှ ရနိုင်သည်။ ထိုပြင်တ၀ စာရေးသူ ပြောချင်လိုသော သာမန်ခလေးတယောက်မှ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများစွာပိုင်ဆိုင်သည့် နာမည်ကျော် အနုပညာရှင် စာရေးဆရာတဦးဖြစ်လာနိုင်သည့်၊ ဖြစ်လာဖို့ အတွေးအမြင်များ၊ အလေ့အကျင့်များ၊ အတွေ့အကြုံများမှသည် မြောက်များစွာသော အကြောင်းအရာများကို အတုယူသင့်ဖွင့် တွေ့နိုင်သည်။
ဆရာနှင့် လူမှုကွန်ရက် ၀က်ဆိုဒ်များတွင် မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးမှ သူငယ်ချင်း တယောက်ညွှန်းသော ဆရာ့ဘလော့ တွင် ဆရာငယ်ဘ၀အကြောင်းလေးများ၊ ဆရာအတွေးအမြင်များ၊ ကဗျာများကို ကျနော်တတ်သော မတောက်တခေါက် အင်္ဂလိပ်စာလေးဖြင့် ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးသည်။ ယခုတော့ ကျနော် ထိုအကြောင်းအရာများ များစွာပါဝင်မည့် ဗမာလိုရေးထားသော စာအုပ်ကို လက်ဝယ်တွင် ဖတ်ရှု့ရသဖြင့် နှလုံးပီတိဂွမ်းဆီထိ ဖြစ်ရသည်။
မနေ့ညက ဖတ်နေရင်းနှင့် ဆရာဆီ စာရေးချင်သည့် စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့် လူမှုကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးဝက်ဆိုဒ် စာတိုပို့စနစ်မှ စာတိုလေး ရေးပို့လိုက်ရာ ဒီနေ့ ညနေတွင် ဆရာ့ဆီမှ ပြန်စာလာပါသည်။ ထိုအတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ ဆရာနှင့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဆက်သွယ်မှုလေးကို အမှတ်တရ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
စာအုပ်အကြောင်း အနှစ်ချုပ်အနေဖြင့်ကို မြန်မာဘွခ်ရှော့မှ တင်ပြလိုက်ပါသည်။ ဒေါက်တာမောင်မောင်ညို၏ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်တွင် ဆေးအကြိုသင်တန်း (မန္တလေး)တက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ်၌ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ဆရာဝန်ဘွဲ့၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ်၌ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်၏ ဆေးပညာ ပါရဂူဘွဲ့၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မိရှိဂန်ပြည်နယ် တက္ကသိုလ်မှ ဆေးပညာသိပ္ပံ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့လက်မှတ်၊ ၄င်းတက္ကသိုလ်မှပင် လူ့ဆေးပညာကောလိပ်နှင့် အရိုးအရင်းခံ ကောလိပ်မှ M.Dဘွဲ့နှင့် ဆေးပညာပါရဂူဘွဲ့ အပါအ၀င် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဘွဲ့လက်မှတ်များစွာကို ရရှိခဲ့သူ၊ အိမ်ထောင်ရေး ဆေးပညာပေးစာအုပ်များဖြင့် တစ်ခေတ် ထူထောင်နိုင်ခဲ့သူ၊ လက်ရှိတွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကူးချင်းမြို့ရှိ ဆာရာဝပ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်တွင် ဧည့်ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ စာရေးသူ၏ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ဖြစ်သည်။
စာရေးသူ၏ မျိုးရိုးဇာတိ၊ မန္တလေး ဆေးအကြိုကျောင်းသားဘ၀၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဆေးအကြိုကျောင်းသားဘ၀နှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဆေးကောလိပ်များတွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့ပုံ၊ ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးနောက် စစ်ဘက်တွင် ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဖြစ် ပြင်ဦးလွင်၊ တောင်ကြီး၊ မိုင်းတုံ၊ လားရှိုးအပါအ၀င် မြန်မာပြည်အနှံ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပုံ၊ စစ်ဘက် အတွေ့အကြုံများ၊ ဗိုလ်မှူးအဆင့်ဖြင့် အငြိမ်းစားယူခဲ့ပုံ၊ ဆေးတက္ကသိုလ် ၂ တွင် စာသင်ကြားပေးခဲ့ပုံ၊ ဆေးကုသမှု အတွေ့အကြုံ၊ စာပေနယ်ထဲသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ပုံ၊ လက်ရှိ မလေးရှားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ထိုင်း၊ မလေး၊ စင်ကာပူ၊ သြစတေးလျနိုင်ငံများသို့ အလည်ခရီးထွက်ခဲ့ပုံများကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖတ်ရှုကြရမည်ဖြစ်သည်။
စာအုပ်အစတွင်ပင် ဒေါက်တာမောင်မောင်ညိုအတွက် ရေးပေးထားသော မိတ်ဆွေများ၏ အမှာစာများကို တခြားစာအုပ်တွေထက် ထူးကဲများပြားစွာကို တွေ့ရသည်။ ဆရာ၏ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အတိမ်အနက်ကို မှန်းလို့ပင်ရသေးသည်။ အမှာစာများတွင် ဆရာ ဒဂုန်တာရာ၊ ဆရာပါရဂူ၊ ဒေါက်တာ သော်ကောင်းတို့မှ စ၍ လေးငါးဆယ်ဦး ရေးထားသည်ကို ဖတ်ရသည်။
စာဖတ်ဝါသနာပါသော လူများနှင့် ခေတ်ပြိုင်များကို သိချင်ဖတ်ချင်သော လူများ ၀ယ်ယူဖတ်ရှု့သင့်သော စာအုပ်ဟု နိဂုံးချုပ်ပြောကြားလိုပါသည်။
စာကိုး။ – မြန်မာဘွခ်ရှော့
ဓါတ်ပုံ။ – မြန်မာဘွခ်ရှော့နှင့်ဖေ့ဘွခ်လူမှုကွန်ရက်
>ရာသီစာပါတီများအကြောင်း တစေ့တစောင်း ( ၂)
Filed under: ဗဟုသုတ — Leaveacomment
>ရာသီစာ ပါတီများအကြောင်း တစေ့တစောင်း ( ၂ )
( ၁ ) တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီ – တစည ( နောင်တွင်တစညဟုသာသုံးမည်- စာရေးသူ ) သည် ရှစ်လေးလုံးလူထုအုံကြွမှုကြီးကြောင့် နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်မှ ပြုတ်ကျပျောက်ကွယ်သွားရသည့် မဆလပါတီ အမာခံခေါင်းဆောင်ဟောင်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပေါ်ထွက်လာပြီး မဆလတဖြစ်လဲ တစည ပါတီလို့ နာမည်တက်ခံခဲ့ရသည့် ပါတီဖြစ်သည်။ ယခင် တစညပါတီဥက္ကဌဟောင်း ဦးသာကျော်မရှိတော့သည့်အတွက် ယခု အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းချိန်မှာ ဥက္ကဌအဖြစ် ဦးထွန်းရီ ( ဒု-တပ်ချုပ်- ကြည်း – ငြိမ်း ) ဖြစ်ပြီး၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ကတော့ ဦးသန်းတင် ( ဒု-၀န်ကြီးချုပ် ( အရေးပေါ် – ၈၈ )၊ စစ်ဆင်ရေးအပြီး စစ်ဆင်ရေးစာအုပ်ဖြင့် ၂၀၀၄ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆုရ ) ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများနှင့် အရည်အချင်းများသည် အားရဖွယ်ဖြစ်သော်လည်း အသက်အရွယ်အားဖြင့် ၁၉၂၆ ခုနှစ်ဖွားများဖြစ်သောကြောင့် ကြီးမြင့်နေပေသည်။ ပါတီဝင် အင်အား ၅ သိန်းခန့်ရှိပြီး ရန်ကုန် ရွှေတောင်ကြားတွင် ပါတီရုံးချုပ်တည်ရှိသည်။ ၉၀ ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက အရှုံးကြီး ရှုံးခဲ့ရပေမဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရဖွယ်ရှိတယ်လို့ မျှော်လင့်တွက်ဆထားတဲ့ပါတီဖြစ်သည်။
( ၇ ) ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) သည် ဦးသုဝေ – ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းများရဲ့ သမီးများဖြစ်ကြသည့် ဒေါ်သန်းသန်းနု ( ဦးနု သမီး) ၊ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း ( ကျော်ငြိမ်း သမီး) နှင့် ဒေါ်နေရီဗဆွေ (ကျားကြီးဗဆွေ သမီး ) တို့အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ( ၂၁ ) ဦးနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသုဝေသည် စစ်အစိုးရဟာ စစ်တပ်ပီပီ စနစ်တကျနောက်ဆုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး၊ ယခုလိုရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ပေးခြင်းသည် ကောင်းသောအလားအလာဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ်အကောင်းမြင်သဘော စိုက်ထူးထားသူဖြစ်သည်။
စာကိုး – ၀င်းတင့်ထွန်း ( ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့အစည်းအသင်းအပင်းများအညွှန်း)
>ရာသီစာ ပါတီများအကြောင်း တစေ့တစောင်း
(၃) လားဟူ အမျိုးသားဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ( The Lahu National Development Party – LNDP)
(၄) ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွှတ်ရေးပါတီ (Kokang Democracy and Unity Party – KDUP) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ကျတော် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ အကြီးအကဲများကိုလူတိုင်းစေ့နီးပါး မလေ့လာနိုင်တော့သော်လည်း ပါတီ ၃၇ ပါတီအား အကျဉ်းဖျဉ်းသဘောလေ့လာထားမိပါသည်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ရေးဥပဒေအရ နိုင်ငံရေးပါတီ အမြောက်အများထွက်ပေါ်လာသော်လည်း ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ကျန်ခဲ့သည်မှာ ၁၀ ပါတီသာ ရှိပါတော့သည်။ ထိုပါတီ ၁၀ ခုအနက် ၅ ပါတီသာလျှင် လက်ရှိစစ်အစိုးရ၏ ( ၈-၃-၂၀၁၀)မှာ ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ အရ ၊ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း အသစ်ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီဟောင်း ၅ ခုတွင် ၁ ပါတီဖြစ်သော ပြည်ထောင်စု ကရင်အမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ်သည် ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ကျန်နိုင်ငံရေးပါတီသစ်များသည်လည်း ပေါ်ထွက်လာပြီး နအဖ စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် လိုက်နာမည်ဟု ကြိုတင်ခံဝန်ချက် လက်မှတ်ရေးထိုးကာ စစ်အစိုးရက ဦးဆောင်ကျင်းပပေးမည့် ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် – ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေအထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ တာစူလျှက်ရှိကြသည်။
– ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ – ၂၀၀၈
>စက်တင်ဘာညနေခင်း၊ သူနှင့် မိုးစက်ပွင့်လေးများ
Filed under: အက်ဆေး — 1 Comment
>Happy Birthday !
Filed under: မွေးနေ့ —4Comments
၂၁ ရက် ဩဂုတ်လ ဆိုလျင်ဖြင့် ကျတော်၏ မွေးနေ့မင်္ဂလာအခါသမယ ဖြစ်ပါသည်။ ထူးခြားတိုက်ဆိုင်စွာ ဤကဲ့သို့ မွေးနေ့ပို့စ်လေးအား ရေးနိုင်လိုက်ခြင်းကို ၀မ်းသာမိပါသည်။ အားလုံးပဲ ကျတော်နဲ့တကွ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူပြည်သား အပေါင်းတို့ ကျန်းမာရွှင်လန်း လန်းဖြာနိုင်ကြပါစေလို့….. ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်..။
Filed under: ပရဟိတ —2Comments
သွားရောက်သည့် နေ့ ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ချိန်းဆိုထားသည့်အတိုင်း မနက် ၇ နာရီခွဲတွင် ကျတော့် ရုံးမှ ကားဖြင့်သွားပါသည်။ လိုက်ပါသည့် လူများမှာ များများစားစားမရှိပါ။ ကျတော်နှင့် သူငယ်ချင်း သုံးယောက် ပေါင်း လေးယောက်ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းကြောင်းမှာ ရန်ကုန် – နေပြည်တော် မြို့ရှောင်လမ်းသစ်မှ သွားပါက မိုင်တိုင် ၁၅ ရောက်လျှင် ဘယ်ဘက်သို့ ကွေ့ရပါမည်။ သို့ရာတွင် ကွေ့ကြော မရှိသောကြောင့် မိုင်တိုင် ၁၅ကိုကျော်၍ နောက်ထပ် ၅ ဖာလုံထပ်သွားရပါသည်။ ထိုအခါ ကွေ့ကြောရောက်မှ ကွေ့ပြီး ရန်ကုန်- နေပြည်တော် လမ်းတံတားအောက်ကို ၀င်ပြီး လှေလှော်အင်း အကျဉ်းစခန်းကို ဖြတ်သန်းပြီး အလွန်ဖုန်ထူသော လမ်းအတိုင်း သွားရပါသည်။ အကျဉ်းစခန်း စစချင်းအ၀င်မှာတင် ခြေချုပ်တန်းလန်းနှင့် အကျဉ်းသမားများ အထုပ်များထမ်းနေသည်ကို နေပူပူအောက်တွင် တွေ့ရပါသည်။
Filed under: အတိုအထွာ —7Comments